Mayelana NATHI - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
I-KingHow Kusukela ngo-2005
Njengomkhiqizi wesikhwama, sikhiqiza uhla oluphelele lwezikhwama iminyaka engaphezu kwengu-15. Ngenkonzo yethu esezingeni esezingeni eliphakeme kanye namakhasimende, besilokhu sisebenzisana namakhasimende ethu ukwenza imikhiqizo ethungiwe enhle kakhulu itholakale.
Siyawazisa amakhasimende ethu emhlabeni wonke, asenze saphumelela futhi sahamba iminyaka eminingi kangaka kulo mkhakha. Okufanele sikwenze kuphela ukuqhubeka nokunikeza amakhasimende ethu ikhwalithi ephezulu nentengo enhle ukubenza banqobe. Uyemukelwa ngokwengeziwe kumakhasimende ukuze uthintane futhi wakhe ubuhlobo besikhathi eside.
Izindawo zethu zomkhiqizo eziyinhloko zifaka ojosaka, izikhwama ze-duffel, izikhwama zemishini, izikhwama ze-tote, i-waist pack, izikhwama zesikole nezinye ezisebenza ngaphandle, ezemidlalo yokuzivocavoca, ukuhamba, ukubuyela esikoleni, okokusebenza kwamathuluzi, ilaptop yedijithali nenhloso yokumaketha. Siphatha nokuthengiswa okubanzi kwemikhiqizo exhunyiwe ngokuya ngemithombo yethu, njengetende lokukhempa, izigqoko nezigqoko, isambulela & ijazi lemvula, okokugqoka, okufekethisiwe nokuningi.
Kumakhasimende ethu, sithembisa okulandelayo
● ukuzibophezela kwethu kwikhwalithi nobuqotho obungenakuqhathaniswa
● amanani ethu amahle kakhulu, kungaba owakho noma owokukhishwa kwangaphandle
● imikhiqizo esezingeni eliphakeme ehambelana nemininingwane yakho
● ukulethwa ngesikhathi futhi unikele ngesixazululo esihle sokuthumela ngenkomba
Singukhiye wakho Isixazululo. Vakashela i- ikhasi lokuxhumana ukushaya, ukuthumela i-imeyili, bese uqala nathi namuhla.